Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe
Home / ngwa / Ọkụ na-egbuke egbuke / Ngbapu Igwe Igwe Igwe
Category: Ọkụ na-egbuke egbuke Tags: zụọ onye na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, itinye n'ọkwa okpomọkụ, mbido mmiri, induction tempering okpomọkụ, Usoro iwe iwe ọkụ, nmalite imebi elu, ígwè waya tempering, elu iwe, elu tempering okpomọkụ, iwe ọkụ, tempering itinye n'ọkwa ngwá, usoro iwe iwe, itinye waya waya tempering
Itinye n'ọkwa waya Waya na-agba ume Procee Ngwa
Kedu ihe na-eme ka oge ịmalite ime?
Iwe iwe bụ a kpo oku usoro na-optimizes n'ibu Njirimara dị ka ike na ductility na workpieces na ama ama obi tara mmiri.
Anyị na-ekwenye na ịdị elu dị elu, ntụgharị ọsọ ọsọ, ọrụ ndị ahịa dị mma, na ịsọ mpi.
HLQ bụ onye ndu na ụlọ ọrụ na-eme ka ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enye ọtụtụ ọrụ ịgwọ ọkụ, gụnyere iwe iwe ọkụ, na China. Oge iwe iwe bụ usoro ọgwụgwọ na-eme nke ọma mgbe emechara usoro mmechi ahụ. A na-eme ya na okpomọkụ dị ala karịa usoro nhịahụ itinye n'ọkwa iji rute oke ike chọrọ ma ọ bụ tinye mgbakwunye na akụkụ ahụ site na ịbawanye ike. A na-ejikarị obere ụda na-eme ka ihe na-emepụta ihe na-adịghị arụ ọrụ iji mepụta nsonaazụ na sekọnd nke yiri ngwa iwe ọkụ nke na-ewe ọtụtụ awa.
Igwe na-ekpo ọkụ na-emetụta usoro iwe na-aga n'ihu nke na-eri nri waya site na eriri ntinye na ọsọ ọsọ.
ihe: Steel waya 3mm na 12mm dayameta
Okpomọkụ: 1922 ºF (1050 ºC)
Itinye n'ọkwa Heating Equipment: DW-UHF-60 kW, 100 kHz induction usoro oku, nke nwere isi oru di anya nke nwere ihe ntinye 1.0 μF maka ngụkọta nke 2 μF
- Akpadoro ikpo oku ikpo oku ato emeputara ma meputa nke oma maka ngwa a iji kpuchie eriri waya
Usoro iwe iwe ọkụ:
A na-eri nri waya site na eriri igwe nke iri anọ na-agbanwe na ọnụego nke 6 mita / nkeji, na-eru ọnọdụ achọrọ iji mee ka usoro iwe ahụ pụta. A na-eji eriri 20 yiri nke a na-emegharị akwụkwọ maka eriri waya kachasị ukwuu
chọrọ ndozi nke 6 ngwaahịa ndepụta-ahịrị n'ime a gasfired ọkụ na-akụda okpomọkụ nyefe n'ime wires nke nta dayameta. Ntinye na-achọ 50% obere ume ma belata usoro ntinye akara site na 90%
- kpoo ọkụ ozugbo n'ime waya, na-echekwa ike na oge
- mfe mwekota n'ime mmepụta akara, rụọ ọrụ throughput
- njikwa akara nke okpomoku
- ọbụna nkesa nke okpomọkụ n'ime waya
A na-arụ ọrụ iwe ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ụgbọ ala iji na-ewe iwe dị elu dị ka akụ, Ogwe na nkwonkwo. A na-ejikwa usoro ahụ n'ime ụlọ ọrụ ọkpọkọ na ọkpọkọ iji kpasuo iwe na-arụ ọrụ siri ike. A na-eme iwe iwe ọkụ mgbe ụfọdụ na ọdụ ike, oge ụfọdụ na otu ma ọ bụ n'ọtụtụ ụlọ iwe dị iche iche.
Gini mere iji jiri iwe iwe?
Usoro ntinye aka anyi na - eweputa ngwa ngwa. Iwe nke igwe siri ike bu oru nke oge na okpomoku. Oge iwe iwe na-eji oge oku dị mkpụmkpụ (ọ na-abụkarị sekọnd) na ọnọdụ dị elu iji rụpụta nsonaazụ na ọgwụgwọ iwe ọkụ na-achọkarị ọtụtụ awa. Enwere ike ịme ihe mmeghe n'ime ihe niile siri ike. Nsonaazụ bụ ihe mejupụtara ike siri ike, ike ductility na ike.
Isi uru nke mbido mmiri bụ ọsọ. Itinye n'ọkwa nwere ike iwe ihe eji arụ ọrụ n'ime nkeji, oge ụfọdụ ọbụna na sekọnd. Iwe ọkụ na-ewekarị ọtụtụ awa. Ma, dị ka iwe ọkụ na-agba ume zuru oke maka ntinye inline, ọ na-ebelata ọnụọgụ nke ihe ndị dị na usoro ahụ. Iwe iwe ọkụ na-eme ka njikwa dị mma nke ọrụ onye ọ bụla rụọ ọrụ. Igwe ọkụ iwekọtara ọnụ na-echekwa ohere dị larịị.
Mmiri na-ekpo ọkụ nke akụrụngwa